Pero: Fiomanana Tamin’ny Diabe Goavana Ho An’ny Rano · Global Voices teny Malagasy
Pero: Fiomanana Tamin'ny Diabe Goavana Ho An'ny Rano
Voadika ny 09 Febroary 2012 10:17 GMT
Tafiditra ao anatin'ny maha-hetsika hanoherana ny tetikasam-pitrandrahana Conga ao Cajamarca azy, izay mety hahatohina ny loharano sy ireo farihy, dia nisy ny fanatanterahana hetsi-panoherana manerana ny firenena sady fanairana ny fahatsiarovantena nomena ny anarana hoe “Ny Diaben'ny Rano”. Ireo mpikarakara dia manazava [es] ao amin'ny pejiny Facebook hoe :
Meteza isika ho renirano. Diabem-Pirenena ho an'ny Rano.
Ny Diaben'ny Rano dia niainga avy tao amin'ny farihin'i Cajamarca ny 1 Febroary ary hifarana ao Lima ny Alakamisy 9 Febroary, ary ho tonga amin'ny faratampony ny Sabotsy 11 Febroary miaraka amin'ny fametrahana ny Sehatra Fifanakalozan-dresaky ny Firenena momba ny Rano ara-drariny, ka ao anatin'izany no tsy maintsy hiresahana ho an'ny daholobe ny mikasika ireo tolo-dalàna sy politika naroso mba handrosoana lavidavitra kokoa.
Firenena iray mandàla ny rariny, miaraka aminà firahalahiana sy firaisankina, ny fiarovana ny rano sy ny Reny Natiora no miantso antsika hiaraka, manome aim-panahy antsika sy mampiray antsika. Arahabaina tonga soa ny DIABEM-PIRENENA HO AN'NY RANO, Mba ho ny tsirairay sy ny rehetra amintsika mihitsy anie no hirotsaka ho isan'ny tampihan-doharano sy teten-drano bitika izay hamatsy ny renirano goavana hanome aina ho antsika ary hanome antsika fanantenana.
Nefa araka ny fampitandremana avy amin-dry zareo mpikarakara ihany, ity diabe ity dia nambaran'ny mpitondra tenin'ireo sehatra samihafa ho miloko politika [es] sy fiverenana an-doharano [es]. Nahazo toerana ny fisavoritahan-tsaina nony injay ilay mpandrindra ny Diabe, Irma Pflucker, notazonin'ny polisy [es] tamin'ny fiampangana azy ho nitazona vola sandoka (vakio eto ny fanazavan'i Irma manokana ny momba ireo [es] tranga ireo).
Nisy ihany koa ireo hetsika natao hanoherana azy io, niaraka tamin'ny fizaràna taratasy [es] ho an'ireo tokantrano tao Cajamarca nampitandrina ireo rehetra izay nandray izany fa i Marco Arana, mpandrindra ankapobeny an'ilay Diabem-Pirenena Ho an'ny Rano sy i Wilfredo Saavedra, filohan'ny Mandatehezana Miaro ny Tontolo Iainana Ao Cajamarca dia tsy hanao afa-tsy ny hanodinkodina ny vola nomena ho an'ilay Diabe.
Hetsika iray tsy dia voamariky ny rehetra ny fanambaràna[es] nataon'ny Governoran'i Cajamarca, Ever Hernández, izay niteny fa andraikitry ny biraony ny manome ny fahazoan-dàlana hanaovana diabe, saingy satria tsy mbola nisy fangatahana voarain-dry zareo avy amin'ireo mpikarakara hanaovana izany, ireto farany no tompon'andraikitra amin'izay herisetra mety hitranga na fikorontanan'ny fiainam-bahoaka. Momba io resaka io, ireo mpikarakara dia niteny [es] fa ry zareo dia ho mailo ary hiantoka tsara ny tsy hitsofohan'ireo mpanakorontana any anatiny any.
Etsy andaniny, mitombo ny fanohanana azon'ilay diabe tato anatin'ny andro vitsy ary nanamafy ny fandraisana anjara ireo mpandray anjara avy any Loreto [es], Arequipa [es], Ancash [es] sy Puno [es], ankoatra ireo hafa. Novinavinaina ho eo amin'ny manodidina ny 500 eo ny olona handray ny fiaingan’ [es] ilay Diabe avy ao Cajamarca ny 1 Febroary, ary amin'ny ora hahatongavany any Lima ny 11 Febroary, dia hisy 5.000 ireo olona [es] hanatevin-daharana avy any amin'ny faritra samifìhafa ao Pero.
Bilaogy maro samihafa no napetraka ho fampahafantarana ireo hetsika samihafa izay hiseho manerana ny firenena ka tafiditra ao anatin'izay Diaben'ny Rano izay, toy ny Marcha Nacional del Agua 2012 [es] (“Diabem-Pirenena Ho an'ny Rano 2012) sy ny Seamos un río (“Meteza isika ho renirano”), ka ao ny “ZOTRA ARAHANA – IREO HETSIKA AMIN'NY DIABE-PIRENENA HO AN'NY RANO” [es] no nakarina. Ny bilaogy Arequipa marcha por el agua (“Arequipa Diabe ho an'ny Rano”) dia namoaka ny “zotra arahan'ny hetsika Diabem-Pirenena Ho an'ny Rano sy ny Aina ao Arquipa ” [es], ary koa ity saribe fanaingoana ity :
Ho an'ny Rano sy ny Aina! "Harena miafina ny Rano, mendrika lavitra noho ny volamena"
Ny bilaogy “El Maletero” “Red Verde Cajamarca” dia nanao tatitra [es] ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety natao tao Cajamarca nanambaràna ny fanombohan'ny Diabe ho an'ny Rano. Izy ihany koa dia efa nandefa nialoha ity saribe ity avy amin'ny antso hanetsehana fanohanana ilay diabe hatao any Iquitos, Loreto:
Fanetsehana ho an'ny Rano sy ny Aina, ny 1 Febroary, mitrena ho an'ny rano i Iquitos .
Ny bilaogin'ny Mandatehezana Miaro ny Tontolo Iainana Ao Cajamarca dia mizara [es] ny tohana izay nasehon'ny mpikarakara foibe ho an'ireo mpikarakara ny hetsika mifandray amin'ilay Diabe ao amin'ny faritr'i La Libertad. Eny antsefantsefan'ny zavatra rehetra eny ihany koa io bilaogy io dia manamarika ireo faritra any an-toerana izay misedra olana ara-drano vokatry ny asa fitrandrahana harena ankibon'ny tany :
La participación mayoritaria para la gran marcha será de la población de las comunidades afectadas por los proyectos mineros en el ande liberteño, organizados en nuestras rondas campesinas de Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz y Otuzco. La lucha emblemática es contra el proyecto minero de exploración las lagunas sur de la empresa minera Barrick, que afecta a las lagunas: Los Ángeles, El Toro y Verdes; que son cabecera de cuenca de los ríos Santa, Chicama y Marañón. Así como subcuencas de los ríos Chuyugual (Sánchez Carrión), Caballo Moro (Santiago de Chuco) y Perejil (Otuzco), es en las comunidades afectadas de este proyecto minero donde se ha realizado un trabajo de bases, y de donde esperamos la mayor movilización de masas.
Ny ankamaroan'ireo izay nandray anjara tamin'ilay diabe dia mponina any amin'ireo vondrom-piarahamonina voakitika mivantana amin'ilay tetikasa fitrandrahana harena an-kibon'ny tany any amin'ny faritr'i Libertad any Andes, netsehana nandritra ny fihodinanay tany ambanivolon'i Santiago de Chuco, Huamachuco, Pataz ary Otuzco. Ilay sarin'ady dia hanoherana ilay tetikasa napetraky ny orinasa mpitrandraka harena an-kibon'ny tany, Barrick, ho fitrandrahana ny faritra atsimon'ireo farihy, indrindra fa ny ao Los Ángeles, El Toro ary Verdes, izay loharano mamatsy ny reniranon'i Santa, Chicama ary Marañón, hatramin'ny zana-tsampan'ireo renirano ao Chuyugual (Sánchez Carrión), Caballo Moro (Santiago de Chuco) sy Perejil (Otuzco). Tany amin'ireo vondrom-piarahamonina tena voakasika akaiky amin'ity tetikasa ity no natomboka ny asa fototra ary avy any no iandrasantsika ny tena fientanana goavana.
Chungo sy Batán dia mamoaka [es] lahatsary iray miaty saripika mifandraika amin'ny Diabe Goavana Ho An'ny Rano, ary i Sin Patrones dia mampiseho lahatsary iray [es] misy ny fanambaràn'ireo manampahaizana manokana, José de Echave sy Carlos Monge mikasika ny maha-zava-dehibe ny ady ho fiarovana ny rano natao nandritra ny tafatafa iray ho an'ny mpanao gazety tao Cajamarca. Etsy ankilany, Punto de Vista y Propuesta dia mampakatra [es] “sombin-kira firavoravoana” avy amin'ny Diabem-Pirenena ho an'ny Rano sy ny Aina.
Farany, Servindi dia nampakatra [es] saribe iray mifandraika amin'ny famindràna natao tao Lima mba ho fankalazana ny fiaingan'ny Diaben'ny Rano tany Cajamarca.
Diaben'ny Rano. Meteza isika ho renirano !
Lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy manokan'i Juan Arellano tamin'ny 31 Janoary 2012 [es]